မောင် (စွယ်စုံကျမ်း): ချစ်သူချင်းပဲ တစ်ချက် နှစ်ထောင့်ငါးရာ တန်ပါတယ်လေ.(အသက်ပြည့်မှဖတ်ပါ)
ချစ်သူချင်းပဲ တစ်ချက် နှစ်ထောင့်ငါးရာ တန်ပါတယ်လေ.(အသက်ပြည့်မှဖတ်ပါ)
လမ်းခွဲ ……….. “နင် နဲ့ ငါ လမ်းခွဲကြရအောင်..ဇော်” “ဟင်…..နင် တကယ်ပြောနေတာလား ကေခိုင်” “အေး..ငါဆုံးဖြတ်ပြီးသွားပြီ” “နင့် ဆုံးဖြတ်ချက်ကို….မပြင်တော့ဘူးလားဟာ” ကောင်လေးက စို့စို့နင့်နင့်မေး လိုက်တော့ ကေခိုင်မျက်ရည်တွေဝဲလာသည်.. မျက်နှာကိုလွှဲ အံကိုကြိတ်ပြီး ကန်ရေပြင်ကို ငေးကြည့်သည်..။
“ငါ ဆုးံဖြတ်ချက်ချပြီးရင် ပြင်တတ်တဲ့ မိန်းမတစ်ယောက်မဟုတ်ဘူးဆိုတာ နင်သိပါတယ် ဇော်” အင်းလျားရဲ့ လေညှင်း ထဲတွင်ကောင်လေး၏ သက်ပြင်းချသံသဲ့သဲ့က မျောပါသွားသည် ။ . “နင့်ဆုံးဖြတ်ချက်ကို မနက်ဖြန်အထိ ရွေ့ပေးလို့ မရဘူးလား..ကေခိုင်” ကေခိုင်တွေဝေသွား၏ ။
“နင် ဘာပြောတာလဲ ဇော်..” “မနက်ဖြန်မှ လမ်းခွဲရအောင်ဟာ” ”နင်ငါ့ကို ဘာမှ အချိန်လာမဆွဲနေနဲ့ဇော်…ကေ ခိုင်တို့က ဒီနေ့ ဆို ဒီနေ့ပဲ” ”ဟာ..မလုပ်ပါနဲ့ဟာ ဒီနေ့ နင်နဲ့ ငါ လမ်းခွဲလို့မဖြစ်ဘူးဟ….ငါ့မှာ အပြန်ကားခမပါလာ ဘူးဟ.. အဲဒါ နင်နဲ့ ကပ်ပြန်ရမှာ..” “မသာ သူတောင်းစား ဖွတ် နင် ဘာသာ လမ်းလျှောက်ပြန်.. နောက်ဘယ်တော့မှ ငါနဲ့ လာမပတ်သက်မိစေနဲ့” ဆဲဆိုသံတွေပွက်ညံပြီး ကောင် မလေး ခြေဆောင့်ထွက်သွားသည် ကို ကောင်လေး က ငေးကြည့်နေသည်…။ .
“ကေ…ခိုင်” ကျောခိုင်းသွားပြီဖြစ်သော သူမနောက်သို့ ကောင်လေးက နာမည်ခေါ်ပြီး ပြေးလိုက်လာ သည်..။ ကေ ခိုင် ခြေလှမ်းတို့ ရပ်တံ့သွားသလို စိတ်ထဲကလည်း တွေးမိလိုက်၏။
”အဟင်း …ဒီတစ်ခါတော့ ဒီအကောင် တကယ် နောင်တရသွားပြီ။ အဟဲ မိကေခိုင်တဲ့ ။ ဘာရမလဲ ။မိန်းမ မာယာ သဲကိုးဖြာဆိုတာ အဲဒါပဲ..” ကေခိုင်က အောင်မြင်သူအပြုံးလေးဖြင် လမ်းဆက် မလျောက်တော့ပဲ ကျောပေးရပ်ေ နလိုက်သည် ။ သူ ပြေးလိုက်လာပါစေလေ ။ ကိုယ်ကတော့ လှည့်ကြည့်စရာကို မလိုတာ..။
ကိုယ်တော်ချောရဲ့ ခြေသံက သူ့နောက်တည့်တည့်မှာ ရပ်သွားတာသေချာမှ မျက်နှာကို ဆူပုပ်လျက် လှည့်မေး လိုက်သည်။ “ပြော..ဘာလဲ..” “နေပါအုံး ကေခိုင်ရာ..ဟောဟဲ..ဟောဟဲ..ဟိုလေ… နင် ခုနပြောသွားတယ်.. နင်နဲ့ နောက် ဘယ်တော့မှ မပတ်သက်ရဘူးဆိုတာလေ..” ကောင်လေးဒူးထောက်လာပါက လက်မောင်းကိုကိုင် ဆွဲထူပြီး..ဇော်ရယ် ဟု ရုပ်ရှင်ထဲကလို ဆွေးဆွေးလေးပြောကာ ရင်ဘတ်ထဲတိုးဝင်ပြီး ဖက်ငိုလိုက်မည် ဟု ကေခိုင်တွေးပြီး ပီတီဖြစ်နေသည် ။
“ဟိုလေ..နင်ပြောသလို မပတ်သက်နဲ့တော့ဆို.. ဟိုတစ်ပတ်က ငါနင့်ဆီက ချေးထားတဲ့ ပိုက်ဆံ (၅)ထောင်လည်း မဆက်ရတော့ဘူးပေါ့နော်..ဟီး” “သူတောင်းစား…..ဖြောင်း..ဖြောင်း” ကောင်လေး ပါးနှစ်ဖက်ကို ပွတ်ရင်း ကျန်ရစ်သည်။ ထို့နောက် အင်းလျားကန်ဘောင်ကြီးကို ရီဝေေ၀ငေးကြည့်ရင်း တစ်လုံးချင်း ရေရွတ်လိုက်သည်.. “တစ်ချက် နှစ်ထောင့်ငါးရာ.အင်း..တန်ပါတယ်လေ..”
Author MSSK at 1:27:00 PM